ILithophany: iyini nokuthi ungayenza kanjani ngokunyathelisa kwe-3D | Izinsiza kusebenza zamahhala
ILithophany: iyini nokuthi ungayenza kanjani ngokunyathelisa kwe-3D
Ngemuva kwaleli gama eliyinqaba kunendlela enhle kakhulu yokumela ubuciko. I- I-lithophany ithola abalandeli abaningi ngokwengeziwe ngaphakathi kwezwe lomenzi nokuphrinta kwe-3D. Ngayo ungaphrinta zonke izinhlobo zezigcawu, izithombe zomuntu siqu, imidwebo, ubujamo, noma yini efika engqondweni.
Uma unesifiso funda kabanzi ngale ndlela yokwenza ubuciko nge-lithophany, kule ndatshana uzofunda ukuthi kuyini, umehluko namanye amasu afana ne-lithography, nokuthi ungaqala kanjani ukudala imiklamo yakho nge Ukuphrinta kwe-3D.
1 Kuyini i-lithophany?
1.1 ILithophany vs Lithography: umehluko
2 Uyenza kanjani i-lithophany ngamaphrinta we-3D
La lithophany uhlobo lokuqagela kwezithombe namafomu asebenzisa ukukhanya. Phambilini bekusetshenziswa umlilo, ukukhanya kwelanga noma kwekhandlela. Njengamanje kusetshenziswa isibani sesibani. Kunoma ikuphi, umthombo wokukhanya uzodlula eshidini olunochungechunge lwama-silkscarent we-semitransparent ukubumba isithombe.
Umqondo ukuthi ube nawo ubukhulu obukhulu ku-foil ukuze ukukhanya kuyehluka ngokukhanya, kudale izindawo ezithile ezimnyama ezinye kube ngokwangempela. Umphumela muhle impela, ikakhulukazi ukusebenzisa njengokune ukuhlobisa igumbi, noma isibani segumbi lokulala lekamelo lezingane, njll.
Ekuqaleni, lokhu kuqoshwa yayimodelwa ngengcina. Ngemuva kwalokho kwaqala ukusetshenziswa ezinye izinto, njengobumba. Manje, ezinye izinto eziningi zingasetshenziswa, njenge-polyamide polymers noma ipulasitiki yamaphrinta e-3D.
Ku Ngekhulu le-XNUMX Le ndlela izoduma emazweni anjengeJalimane neFrance, ukuze isabalale kulo lonke elaseYurophu kamuva. Abaningi bakhomba uBaron Bourgoing njengomsunguli wayo, futhi uma ufuna ukwazi kabanzi ngomlando wakhe, kufanele wazi ukuthi kunemnyuziyamu ephelele ezinikele kulobu buciko eToledo, e-Ohio (eU.SA), eBlair Museum of Lithophanies.
ILithophany vs Lithography: umehluko
Abanye badida i-lithophany ne i-lithography, Kodwa azifani. I-Lithography yindlela endala yokuphrinta (esasetshenziswa nanamuhla) ukuze ukwazi ukuphrinta ubujamo noma izithombe ematsheni noma ezinye izinhlobo zezinto ezisetshenziswayo ngendlela eyisicaba. Eqinisweni, igama layo livela lapho, ngoba i-lithos (itshe) ne-graphe (umdwebo).
Ngale ndlela ungakwenza dala izimpinda zemisebenzi yobuciko, futhi ngabuye ngaba nenkambu enkulu yokusetshenziswa emhlabeni wokuphrinta, lapho ama-lithographs asasetshenziselwa ukuphrinta.
Esikhundleni salokho, i- I-lithophany isebenzisa i-lithography noma ukuphrinta kwe-3D ukukwazi ukukhiqiza izindawo ezijiyile nezinama-opaque kakhulu, kanye ne-thinnest ne-translucent kakhulu. Kepha le ndlela idinga ukukhanya ukuthola imiphumela.
Uyenza kanjani i-lithophany ngamaphrinta we-3D
Ukuze ukwazi ukudala imisebenzi yakho ye-lithophany awudingi ukuba nekhono lobuciko noma lokudweba, uzodinga eyodwa kuphela Iphrinta ye-3D, intambo, i-PC, nesoftware efanele, nesithombe ufuna ukumela. Akukho okudlula lokho ...
Mayelana nesoftware ye- khiqiza i-lithophany, ungasebenzisa eziningana zazo, ukuguqula isithombe sibe umklamo ofanele i-lithophany ne-delaminator yokuphrinta kwe-3D. Isibonelo, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lewebhu ongalusebenzisa kunoma iyiphi isistimu yokusebenza enesiphequluli sewebhu esihambisanayo.
Lolu hlelo lokusebenza lubizwa Usayizi futhi ungakwazi finyelela kulesi sixhumanisi. Uma usufinyelele lolu hlelo lokusebenza lwewebhu, kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Qhafaza Izithombe bese ukhetha isithombe ofuna ukusiguqula sibe lithophany.
Uma isithombe silayishiwe, manje singene ku- imodeli khetha imodeli oyithanda kakhulu kunazo zonke ezikhona bese ucindezela u-Refresh ukuze uvuselele.
Manje yiya kuthebhu Amasethingi. Uzobona izinketho eziningi:
Izilungiselelo Zemodeli: ukulungisa imodeli ngendlela oyithandayo.
Ubukhulu obukhulu (MM): kuzoba usayizi we-lithophany.
Ubukhulu (MM): ngale pharamitha udlala ngogqinsi lweshidi. Musa ukuyenza ibe mncane kakhulu noma izoba brittle kakhulu.
Umngcele (MM): inketho yokwakha umngcele kushidi noma kuhlaka. Uma ungafuni, setha ku-0.
Ungqimba lwe-Thinnest (MM): udlala ngokushuba kwephikseli yesithombe ukuze kudlule ukukhanya okuncane ezindaweni ezi-thinnest.
Vector ngephikseli ngayinye: Uma siphakeme, kungcono isixazululo, kepha kunengozi yokuthi uma siphezulu kakhulu, ucezu ngeke lwenziwe. Ungayishiya cishe ku-5.
Ukujula kwesisekelo / ukuma: Kwakha isisekelo eshidini lokusekelwa, noma ngabe wenza enye indlela, enjengeshidi eliyindilinga, ngeke usadinga ukuthi lesi sisekelo sime.
Ijika: kuzodala ukugobeka okwengeziwe kushidi. Ungakwazi nokubeka i-360º ukuze iphume ingu-cylindrical. Inketho ekahle yezibani.
Izilungiselelo Zesithombe: ukumisa isithombe ukuze sivumelane kangcono nemodeli.
Isithombe Esikahle / Isithombe Esibi: Isetshenziselwa ukwenza isithombe sigqame noma sibe ngaphakathi, njengoba ufisa. Lokho wukuthi, ukuqondiswa kokukhululeka.
Isithombe sesibuko sicishiwe / isithombe sesibuko sivulekile: isebenza ukudala umphumela wesibuko.
Phenya Isithombe Sivaliwe / Phenya Isithombe Sivuliwe: ungafaka isithombe.
Ukuvuselela Ngokwenziwe / Ukuvuselelwa Kokuchofoza Kwezithombe: Uma uyihlola, lapho uya kuthebhu yemodeli izovuselelwa ngokuzenzakalela.
Phinda Ukubalwa kwe-X: yenza amakhophi avundlile.
Phinda Ubale: yenza amakhophi amile.
Ukuphindwaphindwa Kwezibuko Kuvaliwe / Ukuphindwa Kwezibuko Kuvuliwe: sebenzisa umphumela wesibuko.
Ukuphindaphinda kwe-Flip Kuvaliwe / Ukuphindaphinda kwe-Flip Kuvuliwe: sebenzisa umphumela we-flip.
Landa izilungiselelo: lapho ungamisa khona ifayela lokulanda.
Kanambambili STL / ASCII STL: ukuthi ifayili le-STL ligcinwa kanjani. Kufanele ukhethe kanambambili ongcono.
Ibhukwana / Ukuvuselela: ukulanda ngesandla noma ngaso sonke isikhathi lapho uvuselela. Ngokwami, kungcono kwimodi yezandla, ukuze ulande uma usuqedile.
Shintsha nabo umklamo wakho uze ube njengoba ufuna ngempela, kuya ngecala lakho.
Uma usulungile, cindezela inkinobho Thwebula ukuze i-STL ilandwe.
Uma usuqedile ngalokho, manje yisikhathi sokungenisa i-STL phrinta ngephrinta yakho ye-3DUngasebenzisa noma iyiphi isoftware ehambisanayo ngale fomethi yokuphrinta kwe-3D. Zonke ezinye izinyathelo kuzoba ukuphrinta imodeli, bese ulinda ukuthi iqede.
Ekupheleni, ungasebenzisa ama-bulb ajwayelekile, ukukhanya wekhandlela, ukukhanya kwe-LED, sebenzisa imibala ehlukene yokukhanya, njll. Lokhu sekuvele kuyindaba yokunambitha ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » ILithophany: iyini nokuthi ungayenza kanjani ngokunyathelisa kwe-3D
Isipiliyoni se-OpenEXPO Virtual: UChema Alonso uxoxa nge-DeepFakes nezinselelo zokuphepha kwe-cyber
Isiguquli seToroidal: konke odinga ukukwazi